ကလူ - - Tele RELAY တစ်ခု "Crazy Rich အာရှသား" ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးလစာအငြင်းပွားမှုအတွက်စာရေးဆရာထောက်ခံပါသည်
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် ကလူ - Crazy Rich အာရှသား "၏ညွှန်ကြားရေးမှူး" "တစ်ဦးလစာအငြင်းပွားမှုအတွက်စာရေးဆရာထောက်ခံပါသည်
ကလူ - "Crazy Rich အာရှသား" ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးလစာအငြင်းပွားမှုအတွက်စာရေးဆရာထောက်ခံပါသည်
Jon M. Chu, "Crazy Rich အာရှသား" ၏ဒါရိုက်တာစာရေးဆရာ Adele အဘိဓါန် Lim က, ထို့နောက်တန်းတူလစာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်. အငြင်းပွားမှုတွင်အောက်ပါပဋိပက္ခအောက်ပါ left သောရုပ်ရှင်၏ Co-စာရေးဆရာ၎င်း၏ထောက်ခံမှုထုတ်ဖော်ပြောဆို
။ Palo Alto ကနေတွစ်တာ, Chu, wrote: "မေးမြန်းသူကိုသင်၏သူတို့အဘို့သင်သည်အလောင်းအစား - ငါ Adele အဘိဓါန်အတူရပ်တည်! ကျနော်တို့ရုပ်ရှင်ပစ်ခတ်ကျော်လွန်ပါကယုံကြည်မတိုင်မီကိုယ်ကယုံကြည်သည်။ သငျသညျအများတို့သည်လည်းစိတ်ကူးနိုင်သကဲ့သို့, ညှိနှိုင်းမှုခက်ခဲများနှင့်မကြာခဏရှုပ်ထွေးများမှာ - နေပါစေသင်ဤကဏ္ဍ၌နေသော။ "
ဟောလိဝုဒ်သတင်းထောက်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကထင်ရှား Lim ကပေါ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမနှင့်တွဲဖက်ရေးသားသူပတေရုသ Chiarelli အကြားလုပ်အားခကွာဟမှု၏စီမံကိန်းကို။ Lim ကနံပါတ်များကိုထုတ်ဖော်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သော်လည်း, သတင်းရင်းမြစ် Chiarelli ပိုင်းတွင် 800 000 နှင့် 1 သန်းနှင့် $ 110 000 နှင့်ပိုပြီးအကြားရရှိခဲ့ကြောင်း THR သို့ပြောသည်။ အဆိုပါစတူဒီယို Lim ကအဆိုပါကိန်းဂဏန်းများစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အချင်းစီစာရေးသူ၏အတိတ်အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကိုယ်စားလှယ်များသို့ပြောသည်။
စတူဒီယို၏ဥက္ကဋ္ဌ Toby Emmerich, THR သည်နှင့်အညီ, ညှိနှိုင်းမှုအတွက်၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဌာန၏ရပ်တည်ချက်ကိုထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
"ဒီစတူဒီယိုအမြဲတမ်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်လူတိုင်းအဲဒီမှာနောက်ကျောတွေအများကြီးဖွစျလိမျ့မညျနှင့်ထွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစည်းအဝေး၏အရပျကိုရှာသူတို့သည် သိ. ထို့နောက်မြင့်မားသောအဆင့်မှာတုန်းပဲအနိမ့်ထောက်ပံ့ရေးနှင့်အခွက်တဆယ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။ ငါ Adele အဘိဓါန်မှအနီးကပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မသူမကနဦးကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုမဟုတျကွောငျးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါမူကား, ထုတ်လုပ်သူ, ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်စတူဒီယိုအမှုဆောင်အရာရှိကျနော်တို့အောင်မြင်ရန်ကြောင်းသေချာစေရန်ဦးဆောင်ယူကြပြီ နှစ်ခုစာရေးဆရာများအကြားကွာခြားမှုနှုန်း၏တစ်ဦးအဆင့်အထိ။ အချိန်အများကြီးလွန်ခဲ့သော "နှင့် Lim ကပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ငြင်းဆန်"  ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Warner Bros. အခကြေးငွေ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဝေမျှဖို့အဆိုပြုထား Chiarelli နှင့်အတူအပါအဝင်အဆိုပြုထားနည်းလမ်းများစွာရှိခြင်းပြီးနောက်သူကပြောပါတယ် " ။
ညှိနှိုင်းမှု, ငါသူမ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးကိုခုခံကာကွယ်ခြင်းနှင့်သူမလျှော့တွက်ခံစားခဲ့ရသည့်အခါသှားနိုငျအောငျဖွစျသညျကိုဂုဏ်ယူပါတယ်စဉ်အတွင်း "Chu ကဆိုသည်။
2018 ၏နွေရာသီအတွက်ဖြန့်ချိ, Chu ရုပ်ရှင်ဟောလိဝုဒ်အတွက်အာရှအမေရိကန်များအတွက်တစ်ကွေ့အချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာပင်မစတူဒီယိုရုပ်ရှင် 1993 ကတည်းကတစ်ခုနီးပါးလုံးဝအာရှဖြန့်ဖြူးတင်ဆက်သော "ရွှင်လန်း Luck ကလပ်" ပြည်တွင်းမှာ 174,5 သန်း၏အသားတင်ဝင်ငွေမှတျတမျးတငျထားနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 238,5 သန်းရာ ကိုးနှစ်အတွင်းအများဆုံးအမြတ်အစွန်းစတူဒီယို၏အချစ်ဟာသဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အဆိုပါအဖွဲ့ဟာနေသော်လည်း Chu "သူ၏ငရဲကိုလေးစားအနာဂတ်မှာနှင့် (ငါ) ၌တည်၏။ " ဟုသူက Lim ကအတူလုပ်ကိုင်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်
"ငါသည်အရောင်များ၏အမျိုးသမီးများနှင့်လူများအတွက်ကွာခြားမှုနှုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းများထပ်မံသစ္စာဉာဏ်အလင်းများအတွက်အလွန်အရေးပါကြောင်းကို Adele အဘိဓါန်သဘောတူကျနော်တို့နေဆဲသွားကြဖို့ရှည်လျားသောလမ်းရှိသည်," Chu ရေးသားခဲ့သည်။ "အဘယ်သို့ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဤလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိပြီ, အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်းနှင့်အတူအတွေ့အကြုံ၏တန်ဖိုးအဖြစ် (ငါတို့စပ်ကြားရုပ်မြင်သံကြားဆွေးနွေးရန်တစ်ခုခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါရှိသေးကြောင်းဖြစ်ပါသည် ) စသည်တို့ကိုအသက်တာ၏အတှေ့အကွုံမှဆွေမျိုးရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ, ပံ့ပိုးမှုများကို၏ဖန်တီးမှုအကဲဖြတ်, ရေးသားခြင်း။ ရိုးရှင်းတဲ့အဖြေကို, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အပ်ရွေ့လျားနေသောစောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုနားလည်ရန်ကြိုးစားရမည်ဟုသိရကြ၏။ "
Chu လည်း Chiarelli လုပ်အားခအငြင်းပွားမှုများ၏စစ်ကိုင်း၏လူကြမ်းအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းကိုမသင့်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အကောင်းတစ်ဦးအချင်းလူသား, နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ဦးဖန်တီးမှုအင်အားနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်မှုလုပ်ငန်း, များစွာသောဘဏ်စာရင်းမရပြန်ရေးရန် (စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သူများကဲ့သို့သာအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချစာရေးဆရာများသည်ကိုသိရ) ကိုဖြစ်ပေါ်စေ " သူကဆိုသည်။
Lim ကသညျကား, ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအင်တာဗျူးအတွက်လစာကွာခြားချက်၏ THR အားမိန့်တော်မူ။ "ဒီလမ်းအတွက်အကဲဖြတ်ခြင်းကိုခံရစေရန်သင်ဤသူတို့သည်ငါ၏ပံ့ပိုးမှုများကိုတွေ့မြင်ဘယ်လောက်ကြောင်းခံစားရမှသာစေနိုင်သည်"
"ပတေရုသာယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သနားတျောမူခဲ့ပေမယ့်ဘယ်အရာကိုငါပြုမည်စာရေးဆရာများ၏အဖြူအမျိုးအစား၏ရက်ရောမှုအပေါ်မူတည်မနေသင့်" ဟု Lim ကပြောကြားသည်။ ငါ CRA ပြီးနောက်လစာညီမျှမှုအောင်မြင်ရန်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တန်ဖိုးရှိတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာရဲ့ standard ကိုးကားရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက "ငါကတစ်စုံတစ်ဦးအတွက်ပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုစိတ်ကူးမနိုင် ယခင်ဇာတ်ကားအဘို့အငှါးဘူး။ "
VIDEO ။ အဘယ်သူမျှမ, Jamel Debbouze ဎ
မင်းသားဟယ်ရီအိမ်မှာ Meghan Archi ထွက်ခွာ Invictus အားကစားပြိုင်ပွဲကိုလက်ခံသွား
PHOTOS ။ PSG အသင်း-Real Madrid အသင်း: Isabelle Huppert နှင့်ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း Veronique ဇီဒန်းလျော့နည်း vibrated
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်4,659